Ka fiican quraanjo, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland (WKG)
Weligaa ma joogtay dadweyne aad u tiro badan halkaas oo aad ka dareemeysay yar iyo qiimo yar? Mise waxaad ku fadhiisatay diyaarad waxaadna aragtay in dadka dhulka jooga ay u yaryihiin sida dhiqlaha? Mararka qaar waxaan u maleynayaa in Ilaah hortiisa aan ugu egnahay sida kuwa doog jilicsan oo boodhka ku daadanaya.
Ishacyaah 40,22: 24 Ilaah baa yidhi:
Isagu carshigiisuu ku fadhiyaa dhulka dushiisa, Oo kuwa degganuna waa sida ayaxa oo kale. Isagu samaduu u fidiyaa sida daah oo kale, Oo wuxuu u kala bixiyaa sida teendho oo kale. Wuxuu muujiyaa amiirrada inay yihiin waxba, oo wuxuu xajiyaa xaakinnadii dhulka; mar alla markii lagu beero, isla markiiba lagu beero, mar alla markii qabiilkooda dhulka lagu xidho, wuxuu ku afuufi doonaa inay u engegaan iyo wixii la mid ah Duufaantu waxay u kaxeeysaa sidii buunshe oo kale. Taas macnaheedu waa innagoo ah “ayax ayaynu nahay” oo aan Ilaah wax badan ula jeedno miyaan muhiim u noqon karnaa awood noocaas ah?
Cutubka 40aad ee Ishacyaah wuxuu ina tusayaa doqonnimada dadka lala barbardhigayo Ilaaha weyn: «Yaa abuuray? Waa kan ciidankooda tirada ku soo bixiya, oo kulligood magacyo ugu yeedha. Dhaqaalihiisu aad ayuu u weyn yahay wuuna xoog badan yahay oo qofna ma hilmaami karo » (Ishacyaah 40,26).
Isla cutubka wuxuu ka hadlayaa su'aasha Ilaah ee qiimahayaga. Isagu wuu arkaa dhibaatooyinkeena oo marna diido inuu dhageysto kiiskeena. Moolka qoto dheer ee fahamkiisa ayaa aad uga badan kuwayaga. Wuxuu daneynayaa dadka tabarta daran iyo kuwa daalan wuxuuna siiyaa xoog iyo xoog.
Hadduu Eebbe ku fadhiisiyo carshigii dhulka dushiisa ka sarreeyey, wuxuu run ahaantii arki lahaa keliya sida cayayaanka. Laakiin marwalba way joogtaa, halkan bay innaga jirtaa, annaga ayaa na dhex joogta, tixgelin weynna siinaysa.
Dadkeennu waxay u muuqdaan inay si joogto ah uga welwelsan yihiin su'aasha guud ee macnaha. Tani waxay dadka qaar ka dhigtay inay aamusaan inaan halkaan ku jirno shil oo ay nolosheenuna micno la'aan lahayn. "Markaa aan dabaaldegno!" Laakiin runtii waan qiimo badan nahay maxaa yeelay waxaa laygu abuuray suuradda Ilaah. Isagu wuu tixgeliyaa sidii dad ahaan, oo mid walbaa muhiim yahay; nin waluba jidkiisuu ku falayaa. In ka badan hal milyan, mid walbaa wuxuu muhiim u yahay midka kale - qof walbaa qiimo ayuu u leeyahay abuuraha nafteenna.
Haddaba maxaynu ugu muuqanaa kuwo aad ugu mashquulsan isku dayaya inaan beeninno macnaha midba midka kale? Mararka qaar waxaan aflagaadeynaa, ceebeyneynaa oo aflagaadeynnaa kuwa sita sumcadda Abuuraha. Waxaan hilmaamnay ama iska indho tirnay xaqiiqada ah in Eebbe qofkasta jecel. Mise waxaan ku faanaa waxaan aaminsanahay in qaar loo saaray dhulkaan kaliya inay u soo gudbiyaan “taliyayaal” cayiman? Banii-adamnimada waxay umuuqataa inay ku khaldantahay jaahilnimo iyo isla weynaan iyo xumeyn. Xalka kaliya ee dhabta ah ee dhibaatadan ugu weyni waa, dabcan, aqoonta iyo aaminaadda qofka na siiyey nolosha sidaas awgeedna macno leh. Hadda waa inaan aragnaa sida ugu wanaagsan ee aan wax uga qaban karno arrimahan.
Tusaalaheena aan ula dhaqanno midba midka kale inuu yahay waxa ugu wanaagsan waxa weeye Ciise, kaasoo aan weligii qofna ula dhaqmin sidii qashin. Masuuliyadeena Ciise iyo midba midka kale waa inaan raacno tusaalaheena - in la aqoonsado muuqaalka Ilaah qofwalboo aan la kulanno oo aan ula dhaqanno si ku habboon. Ma waxaan muhiim u nahay Ilaah? Anaga oo ah xamuul u ekaanta muuqaalkiisa, waxaan aad ugu muhimsan nahay isaga oo u soo diray wiilkiisa kaliya inuu u dhinto anaga. Taasna waa intaas oo dhami.